sei kutenga maapps pasina kiredhiti kadhi
Kuru Nhau & Ongororo Maitiro ekutenga maapplication pasina kiredhiti kadhi
Maitiro ekutenga maapplication pasina kiredhiti kadhi
Vamwe vanoti zvinhu zvakanakisa muhupenyu zvakasununguka, asi hazvisi izvo zvinowanzoitika kana zvasvika kune zvinofambisa nhare. Kana iwe uine maziso ako pane yakabhadharwa app, asi usingade kushandisa kiredhiti kadhi, kana iwe uchingova usina imwe, saka ndedzipi sarudzo dzako? Zvakanaka, zvinoenderana nefoni yaunayo uye nekwaunogara.
Kana yako smartphone iri kuita Android, saka uri kutenga kuGoogle Play Store. MuUS, aya ndiwo ako asiri-echikwereti kadhi sarudzo:
Nhare mbozha Kubhadhara
Mutengo wekutenga kunoitwa uchishandisa nzira iyi uchawedzerwa kune yako yemwedzi bhiri bhiri. Heino runyorwa rwevatakuri vanotsigira sevhisi iyi:
Iyi inzira inokurumidza uye iri nyore yekutenga maapp, kunyanya kana uchizviita kashoma uye usingade kubatirwa nemari yekuwedzera mune yako Google Play bhalansi. Kana iwe uchironga kutenga maapplication kana zvimwe zvigadzirwa zvemadhijitari, kunyanya kushandisa nzira iyi, tarisa kune anotakura kana paine muganho wemwedzi (weVerizon iri $ 100).
Google Play Kadhi Yezvipo
Makadhi echipo anouya nekodhi yaunonunura kuwedzera bhalansi kuGoogle account yako. Iwe haufanire kuenda kunze kunotsvaga chitoro kuti utenge imwe, Walmart, Amazon nevamwe vatengesi vanotengesa Google Play Zvipo Makadhi nekutumira e-mail. Kunze kwedambudziko rekudzikinura kodhi, chimwe chakashata ndechekuti huwandu hushoma i $ 10, saka kana iwe uchingofarira rimwe kana maviri maapuro anodhura, unenge wakanamirwa nemari isina kushandiswa. Padivi rekuwedzera, kushandisa kadhi rechipo kunoisa muganho pane zvinogona kubhadhariswa, saka mwana haakwanise kuita netsaona bhiri hombe achitamba mutambo nekutenga-mukati-app, semuenzaniso.
Kunze kwekunge mumwe munhu atumira mari kuaccount yako yePayPal, uchafanirwa kushandisa kiredhiti kana kadhi rekubhengesa kuti ubatanidze kwariri, saka zvinoita sekukunda chinangwa, kunze kwekuwedzera imwe nhare yekuchengetedza.
Kana iwe uri muridzi we iPhone, saka nzira yako chete yekuwana maapplication iApple App Store. Nezvikonzero zvatisingazive, muAmerica, hapana vatakuri vane chibvumirano neApple yekunyorera zvakananga mutakuri, saka sarudzo dzako dzinogumira ku:
App Store Kadhi Chipo
Zvakare inowanikwa kune e-mail kuendesa, uyezve mune yako yemuno tech chitoro kana supamaketi. Musiyano chete ndewekuti kuApp Store iyo yakachipa sarudzo ndeye $ 15 imwe.
Zvekare, iwe unozofanirwa kuwedzera mari kuaccount yako neimwe nzira, kana wakazvipira kusashandisa makadhi echikwereti.
Pakazara, makadhi echipo ndiwo akanakisa sarudzo kana iwe uchida kudzora mashandisiro ako uye uchida kuti account yako mbozhanhare iparadzaniswe zvachose kubva kune chero zvemari zviridzwa zvauri kushandisa. Makadhi echipo anozo chengetedza ruzivo nezve zvaunotenga kure neako anotakura.
cherekedza makumi maviri ekupedzisira efoni
t mobile apple tarisa maseru chirongwa
chinyorwa 8 kuburitsa zuva isu verizon
Mashandisiro ekushandisa foni yako sewebhu webcam
Iyo & apos; iyo iyo 'Yekupedzisira Movie Sabata' zvinoreva kuti renti dzinotangira pamasendi makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe muGoogle Play Chitoro
Maitiro ekusunungura kumusoro kwekuchengetedza pane iPhone
Nguva yekuvandudza yako Apple iPhone, iPad, uye Apple Watch